Episode 34: တောတွင်းမှာ အသက်ရှင် ရုန်းကန်ခဲ့ရခြင်း (ကချင်ဘာသာ)
Ngwipyaw ai nhtoi rai u ga. DohAthan n sen Podcast lamang kaw na kabu gara shakram dat ga ai. ngai gaw esther re. ndai bat hta, Jinghpaw mungdaw kata byin nga ai majanamajaw hprawng yen hkawm wa ai hta asak lawt wa ai 60 ning jan adwi n ding htu bu nta masha nialam hpe na lu na re.
Episode 34: တောတွင်းမှာ အသက်ရှင် ရုန်းကန်ခဲ့ရခြင်း (မြန်မာဘာသာ)
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာချိန်မှာ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ အသက်ရှင်လာတဲ့ အသက်(၆၀)ကျော်အဘွား အင်ဒိန်ထုဘူနဲ့ မိသားစု အကြောင်းကို နာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စိမ်းလန်းသော ချင်းတောင်တန်းပေါ် ဆိုင်ကယ်စီးခရီးစဉ်
နိုင်ငံခြားခရီးသွားများအတွက် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး လမ်းအရှည် ကီလိုမီတာ ရာပေါင်းများစွာ သွားလာနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားသည်။ လမ်းတလျှောက် လမ်းကြမ်းတွေ့လျှင်တော့ သည်းခံရပေလိမ့်မည်။
Will Callan ရေးသားသည်။
ကလဲရ် ဟမ်မွန် နှင့် ဝင်းဇာနည်အောင် ရေးသားသည်။
ရိုက်တာသတင်းထောက်များအား စွဲချက်တင်သင့်၊ မတင်သင့် တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်တော့မည်
ရိုက်တာသတင်းထောက် ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကို စွဲချက်တင်သင့်၊ မတင်သင့် ထုချေလျောက်ထားမှုကို ဇူလိုင် ၂ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Episode 33: မုတ်သုံမိုးအောက်က ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာ ပြင်းထန်တဲ့ မုတ်သုံကာလကို ရောက်နေတာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် တစ်သန်းခန့်ဟာလည်း လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကပ်ဘေးကို ထပ်မံရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။